Siyaasi ku sheeg aflagaadeeyey somaalida Iswiidhan kuna sheegay “buradda kansarka” | Somaliska
Islamka & Yurub / Nolosha
Tan iyo markii xisbiga xag jirka ah ee dalkaan Iswiidhan ka mid noqday xisbiyada ugu aawada badan, waxaa soo baxayey aflagaada iyo meel ka dhaca lugu kaco soomaalida Iswiidhan, ku waas ah aan si xishood laheyn loogu adeegsad barabah bulshadda iyo aalada inter-ka.
Hadaba muddo haatan laga joogo labbo toddobaad ayaa waxaa nin lugu sheegay siyaasi xogheyn u ah xisbiga Deegaanka islamarkaasina ah xildhibaan ka tirsan gollaha deegaanka ee degmadda Järfälla ee duleedka caasimadda Iswiidhan, waxaa uu qoraal laga yaq yaqsoodo oo soomaalida ku aflagadeeyno ku qoray bartiisa facebook oo ku sheegay ineey yihiin “buradda Kansar”.
Ninkan oo lugu magacaabo Jonas Serneholt, ayaa qoray ereyo ay ka mid yihiin “Ma ahan markii ugu horeeysay ee soomaalidu galaan dembiyo noocaan ah, si kasta oo ay u yihiin mudaawiniin, muwaadin-nimadoodana waxaa haga jinsigooda ( oo ula jeedo jingsiga ragga) Tani waa mid loo fasiran karo kufsi dhawaan dhalinyarro soomaali ah ay ku kaceen.
Wargeyska maxaliga ah ee ka soo baxa degmadaasi oo ah wargeyskii ugu horeeyey ee daaha ka roga qoraaladda cunsurinimada leh ee ninkani ku qoray facebook-ga, waxna ka wediiyey ayaa isagoo isla gar leh eeda weli dusha ka saaray soomaalida oo ku sheegay “In iyaga oo aan si fiican luqada u baran yimaadaan suuqa shadda, dumarkan a aan tixgelin aqoona aan u laheyn juquraafiga magaalo ahaan ee caasimadda. Qoraalkan dambe ayuu la xirriirayey dhacdo isaga u soo joogay oo ah inuu raacay baabuur kuwa u adeega gaadiidka islamarkaasina darawalkii gaariga kala garan waayey juquraafi ahaan magaaladda.
Mar wax laga weydiiyey qoraalka uu soomaalida ku aflagaadeeyey ayuu sheegay sheegay in uu ka saaray isagoo sheegay “In qoraal xun ahaa”.
“Maadama aan ahay bani’aadam (dad) waxaa ay aheyd mid waali ah, tan dhacdayna waxeey aheyd falal aan soo arkay oo quseeysay adeega basaska gaar ahaan kuwooda ay raacaan dad gaar ah (färdtjänstkund). Ninkan ayaa ugu dambeyntii arrintan aawgeed shalay iska casilay xilkii uu ka hayey degmadda, iyadoo xisbiguna ay sheegeen in aannu matelin shaqsi noocaas ahina aan ku jiri karin xisbigooda, islamarkaasina soo dhaweeyey.
Ma ahan markii ugu horeeysay ee shaqsiyaad sheegta siyaasiin dalkaan ka tirsan ha ahaadan kuwa u dhashay iyo ajaanib, waxaa horey u aflagaadeeysay haweeneyn lugu magacaabo Amina Kabaveh oo ka tirsan xisbiga biddix ku sheegtay soomaalida kuwo argagaxiso ah, iyadoo haweeneydani ay faafisay muuqaal fiidiyow ah oo ay kooxo cunsuriyiin ahi ku aflagaadeeynayey soomaalida. Waxaa sidoo kale horey u aflaagadeyey dhaqtar ku sheegay in soomaalida garaadkoodu aad u hooseeyo.
Stockholm: Kirada guryaha gacanta labaad oo cirka isku shareertay
Booliska oo ka digay tuugo doonayso in ay dhacdo macaamiisha Swedbank
Waxaa la yiri balaayo ama il hala’aato ama lug bal eega kani isha la’ soo maahan balaayada laga hadli jiray.